लुम्बिनीबाट राष्ट्रिय सभामा पुगे पार्टीमा अवसर नपाएका पुराना नेता
बुटवल | माघ १२, २०७८
लुम्बिनी प्रदेशमा राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी भएका छन् ।
३ पदका लागि सत्तारुढ दलले चुनावी गठबन्धन बनाएर साझा उम्मेदवार उठाएका थिए भने नेकपा एमाले एक्लै प्रतिस्पर्धामा थियो ।
लुम्बिनी प्रदेशबाट कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका उम्मेदवार विजयी भएका हुन् । लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार थिएनन् ।
कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका बाँकेका युवराज शर्मा, नेकपा एकीकृत समाजवादी पाल्पाकी राजेन्द्र लक्ष्मी गैरे र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट उम्मेदवार बनेका रुपन्देहीका तुलबहादुर विश्वकर्मा भारी मतका साथ विजयी भएका छन् ।
विजयी उम्मेदवारहरू पार्टीका पुराना नेतामा पर्छन् । पार्टीमा योगदान गरेका तर अवसर नपाएकाहरू राष्ट्रिय सभामा पुगेका हुन् ।
को हुन् युवराज शर्मा ?
प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेविसंघको सभापति हुँदा युवराज शर्मा उपसभापति थिए । उनी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–२ का वासिन्दा हुन् ।
शर्मा २०२४ सालमा पञ्चायतको विरोध गर्दा पहिलोपटक जेल परेका थिए । त्यसपछि पटक–पटक जेल परेका छन् । उनी २०३० सालमा भूमिगत रूपमा पार्टीको जिल्ला सचिव समेत बनेका थिए ।
उनी पूर्व शिक्षक समेत हुन् । वेतहनी विद्यालय, खजुरा आदर्श मावि हुँदै महेन्द्र माविमा पनि उनले पढाए । २०४६ सालमा बाँकेबाट जनआन्दोलनको नेतृत्व नै शर्माले गरेका थिए । त्यसपछि उनी शिक्षण पेशा छाडेर राजनीतिमा पूर्ण रूपले होमिए ।
बाँकेको सभापति हुँदै अहिले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेकै बेला उनलाई पार्टीले राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार बनाएको थियो ।
को हुन् राजेन्द्र लक्ष्मी गैरे ?
राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे पाल्पाको रामपुर नगरपालिकामा जन्मिएकी हुन् । अहिले तानसेन–७ प्रभासमा बस्छिन् उनी । २०२४ सालमा जन्मेकी गैरे २०३६ सालदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय भएकी थिइन् । त्यो बेला रामतुल्सी मावि रामपुरमा अध्ययन गर्दैगर्दा बहुदल र निर्दलको राजनीतिक संघर्ष थियो । त्यस क्रममा गैरे बहुदलको पक्ष लागिन् ।
उनी २०३९ सालमा अनेरास्ववियूको जिल्ला सदस्य बनिन्, त्यसपछि निरन्तर पार्टीमै छिन् । अविवाहित गैरेसँग पाल्पा एमाले जिल्ला कमिटी सदस्य ४ पटक र जिल्लाको लेखा आयोगको अध्यक्ष भएर काम गरेको अनुभव रहेको नेकपा (एस) पाल्पा सचिवालय सदस्य पदम गैरेले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।
उनी नेकपा एमाले नवौं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवार बनेकी थिइन् । उनी झिनो मतान्तरले पराजित भइन् भने महिला संगठनको केन्द्रीय सदस्य बनेर काम गरिन् ।
एमाले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि उनी विरोधमा उत्रिएकी थिइन् । एमाले भित्रको शक्ति संघर्षको परिणाम स्वरूप दल विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन भएपछि उनी नवगठित दलमा सामेल भइन् । जसले उनलाई राष्ट्रिय सभामा पुर्‍यायो ।
अहिले उनी एकीकृत समाजवादीबाट उम्मेदवार बनेकी हुन् । उनी नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट अखिल नेपाल महिला संघको केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्जको भूमिकामा छिन् ।
उनी पार्टीको केन्द्रीय सदस्य पनि हुन् । एमाले विभाजनपछि नेकपा एसमा लागेसँगै उनले अवसर पाइन् ।
को हुन् तुलप्रसाद विश्वकर्मा ‘राजेश’ ?
राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका विश्वकर्मा पार्टीका पुराना कार्यकर्ता हुन् । उनी २०३५ सालदेखि पार्टीमा सक्रिय थिए । उनलाई पार्टीमा राजेश विक भनेर चिनिन्छ ।
जनमोर्चा निकट रक्तिम सांस्कृतिक अभियानका कलाकारदेखि हाँक पत्रिकामा पत्रकारिता गरेको अनुभव समेत विकसँग छ । राजमोको जातीय समता समाजको केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुन् उनी ।
विक रक्तिम सांस्कृतिक अभियानका संस्थापक समेत रहेका अखिल छैठौंका निर्वतमान अध्यक्ष विमल पोखेलले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।
उनी सैनामैना नगरपालिका मुर्गियावासी हुन् । उनको जन्म बागलुङमा २०१५ सालमा भएको हो । बागलुङको गलकोटमा जन्मेका विश्वकर्माको अध्ययन गलकोट माविमा भयो । पीएन क्याम्पस पोखरामा आईएसम्मको अध्ययन गरेका उनले केही वर्ष शिक्षण पेशा पनि अँगालेका थिए । अहिले राजनीति गरेर अन्तिममा नेतृत्वमा पुग्ने अवसर मिलेकोमा उनी खुशी छन् ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा एमालेले खाता खोल्यो, प्रदेश १ बाट सोनाम ग्याल्जेन शेर्पा विजयी